खानाको स्वाद र बास्‍ना थाहा पाउन छोड्नु भएको छ? ‘कोरोना हुनसक्छ’ – नेपाल टेलिभिजन
खानाको स्वाद र बास्‍ना थाहा पाउन छोड्नु भएको छ? ‘कोरोना हुनसक्छ’
काठमाडौं, चैत्र १३ः विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरसको लक्षण सामान्य रुघाखोकीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि कोरोना नै हो कि भनेर त्रसित बन्ने अवस्था आएको छ ।
मौसम परिवर्तनको समय छ । यतिखेर रुघाखोकी र ज्वरोका विरामीहरु देखिनु सामान्य हो । नेपालमा पनि कोरोना भाइससबाट संक्रमित भेटिन थालेकाले आम नागरिकलाई थप त्रसित बनाएको छ । यस्तो समय सामान्य रुघाखोकी र कोरोनाको संक्रमण कसरी छुट्याउने मुल प्रश्न हो । यस सम्बन्धमा हामीले सम्बन्धित विशेषज्ञसँग परामर्श गरी केही सुझाव लिएका छौं ।
कोरोना भाइरसको लक्षणमा रुघाखोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु, सास फेर्न गार्ह्रो हुनु आदि रहेका छन् । सामान्य रुघाखोकी लाग्दा नाक बन्द हुने, हाच्छ्यु धेरै आउने, खोक्दा कफ निस्कने र नाकबाट सिंगान बग्ने हुन्छ । तर कोरोनाको संक्रमण भएमा रुघा लाग्दा नाक बन्द नहुने र रातिको समयमा सुख्खा खोकी लाग्ने र सिंगान पनि कम बग्ने नाक कान घाँटी विशेषज्ञ डा नैनबहादुर महतो बताउनु हुन्छ ।
यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमित विरामीहरुमा गरिएको अनुसन्धानले एउटा नयाँ तथ्य फेला पारेको छ । रुघाखोकी र ज्वरो नआए पनि यदी कसैले स्वाद र बास्‍ना थाहा पाउन छोडेको छ भने उसलाई कोरोनाको संक्रमण हुन सक्छ । कोरोना संक्रमणका कारण मानिसले विस्तारै स्वाद र वास्‍ना थाहा पाउन छोड्ने भएकाले त्यस्तो कुनै लक्षण भएमा पनि कोरोनाको आशंका गर्न सकिने चिकित्सकको भनाई छ ।
कोरोना भाइससले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरुलाई छिटो आक्रमण गर्ने गरेको छ । विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुको तथ्यांक हेर्दा पनि अधिकांश ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीहरु रहेका छन् । त्यसैले कोरोना विरुद्ध लड्न हरेक मानिसले आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नियमित पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्ने चिकित्सहरुको सुझाव छ ।
नेपालीहरुको दैनिक भोजनमा अदुवा, लसुन, बेसार जस्ता पदार्थहरु समावेश भएका हुन्छन् जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन सघाउने चिकित्सकको भनाई छ । साथै मुख्यतः संक्रमण शरीरमा प्रवेश गर्न सक्ने मुख्य अंग नाक, मुख र आँखा भएकाले नियमित साबुन पानीले हात धुने र व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ । नियमित मनतातो पानी पिउनाले मुख तथा घाँटीमा भाइरसको प्रवेश भएको भएपनि त्यसलाई पेटमा पुर्‍याउन सकेमा पेटमा भएको एसिडिक प्रकृयाले मार्ने गर्छ । यसरी केही सामान्य कुरामा ध्यान दिएमा कोरोनाको संक्रमणबाट आफू पनि बच्न र अरुलाई पनि बचाउन सकिन्छ ।-